राष्ट्र बैंकको कडाइपछि शाखा विस्तार कतिले बढ्यो ?
काठमाडौं, २१ जेठ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा विस्तारमा विशेष जोड दिन थालेका छन् । छाटो समयमै सुगमदेखि दुर्गमसम्मका जनतालाई वित्तीय पँहुचमा ल्याउने सर...
बुम रेमिट्यान्स र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं,१९ जेठ । बुम रेमिट्यान्स प्रा लि, कालिमाटी सोल्टिमोड काठमाण्डौले कृषि विकास बंैक लिमिटेडलाई आफ्नो एजेन्ट नियूत्त गरेको छ । बुम रेमिट् मार्फत नेपालीले विदेश बाट पठाएको रकम कृषि विकास बंैक लि...
सातामा पाँच प्रतिसतको कारोवार बृद्धि, दुुई अर्ब ८४ करोडको खरिद बिक्री (तालिका सहित)
काठमाडौं, १९ जेठ । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५८ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार २७३४१ कारोबारबाट दुई अर्ब ८४ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरका ५१ लाख २१ हजार एक सय ६० कित्ता सेयरहरु ...
तीन वटा बैंकद्धारा हकप्रद सेयरको लागि बोर्डमा आवेदन
काठमाडौं, १९ जेठ । तीन वटा बैंकहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष आवेदन दिएका छन् । बोर्डका अनुसार ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, किसान माईक्रो फाईनान्स बित्तीय संस्था र माउन्ट मकालु डेभलपम...
टिकेन नेप्सेको बृद्धिदर, तीन अंकले घट्दा ६४ करोड ९१ लाखको कारोवार (तालिका सहित)
काठमाडौं, १८ जेठ । अघिल्लो दिन बढेको नेप्से आज भने घटेको छ । नेप्से आज तीन दसमलव आठ अंकले घटेर १६ सय चार दमसलव ३१ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि शुन्य दसमलव ९३ अंंकले घटेर तीन सय ४० दसमल...
नेप्से १६ सय अंकमा नै फर्कियो, ६७ करोड ९३ लाखको कारोवार (तालिका–सहित)
काठमाडौं, १७ जेठ । नेप्से पुन १६ सय अंकमा फर्किएको छ । लगातर घटेर १५ सय अंकमा झरेको नेप्से साताको चौथौ दिन बुुधबार १३ दसमलव ६८ अंकले बढेर १६ सय आठ दसमलव ११ अंकमा चढेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि दुई ...
एनसीसी बैंकमाथि एलबीको लगाम ! आजकाल प्राय सेतो वस्त्रमा देखिन्छन्
काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका ‘नटवरलाल’का रूपमा कहलिएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ (एलबी श्रेष्ठ) आजकाल प्राय सेतो वस्त्रमा देखिन्छन् । सादा जीवन बाँच्दै शान्ति, प्रेम, करुणाको सन्देश बाँड्न...
सन्राइज बैंकको शाखा हेटौंडामा स्थापना
काठमाडौं, १७ जेठ । सन्राइज बैंक लिमिटेडले मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा शाखा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन् आज बुधबारका दिन एक कार्यक्रमका बिच नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यलय वीर...